Fedora achasiyawo 32-bit vhezheni | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe uine komputa yakangwara, iwe uri kunze kwesarudzo. Ichokwadi kuti kucharamba kuine mamwe kwemakore mazhinji, asi kune akawanda maLinux anogovera ayo asingazoburitse makumi matatu nemaviri-vhezheni yavo yekushandisa system. Mumwe wekutanga kusiya ichi chivakwa aive Arch Linux, asi vamwe vanozoisiya mumavhiki mashoma, seUbuntu, ane Eoan Ermine mwedzi uno haachazosanganisi chero kunhuhwirira mu32-bit vhezheni (kunyange Ubuntu MATE inotanga zvinhu zvakakosha. ). Inotevera kuzviita, Fedora.
Kekutanga iyo Fedora yekuvandudza timu yakasimuka kuenda bvisa iyo 32-bit Yakanga iri muna 2017, pavakanga vachigadzirira Fedora 27. Iyo yazvino 32-bit vhezheni yaida kuziva kana nharaunda yaifarira, asi ivo havasi. Neichi chikonzero, uye nekuti mazhinji Hardware atove kutsigira 64-bit, 32-bit haichazowanikwa mune imwe yeanonyanya kufarirwa Linux masisitimu anoshanda.
Iyo nharaunda haina kufarira 32-bit vhezheni yeFedora
Justin Forbes, ari pamusoro pekuchengetedza iyo Fedora kernel, anoitsanangura seizvi:
Iko hakuna kukwana kwenharaunda nhengo dzinoda kuita basa rekuchengetedza zvivakwa. Usatombo kunetseka zvakadaro: Fedora haidonhedze ese 32-bit mapaketi. Mazhinji mapakeji i686 achiri kugadzirwa kuti ave nechokwadi chekuti zvinhu zvakaita se multilib, waini, uye Steam inoenderera ichishanda.
Mune mitsara mishoma, Forbes inopa ruzivo rwese rwakakosha: sezvo pasina kufarira, siya makumi matatu nematatu, asi izvo hazvireve kuti kunyorera kweizvozvo kuvaka hakugone kumhanya. Uye, sezvatakaona apo Canonical yakaratidza kuti yaizosiya 32-mabiti zvachose, kusanganisira mafomu aingowanikwa mukuvakwa ikoko, vashandisi vakanyunyuta nekuti kuchine software yakakosha inoishandisa, senge Waini kana mitambo yakawanda inowanikwa pane Steam.
Nekudaro, zvinoita sekunge chinangwa cheanogona kupihwa ese kugovera ndechekutarisa chete pamakumi matanhatu nematanhatu uye kana tisingafanire kupa chero chinhu chakakosha ndipo pavacharega kupa rutsigiro zvakakwana. Ehezve, chikamu chakanyanya kutorwa chichatorwa nemakomputa ekare asingazokwanise kuisa vhezheni dzazvino dzeFedora, Ubuntu, Arch Linux kana chero yakakurumbira mashandiro. Ivo vagara vazvitaura: kuvandudza kana kufa.
32-bit rutsigiro haichazowanikwa mune inotevera vhezheni yeUbuntu Mate naBudgie
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Sarudzo dzezvikwata zvakasarudzika dziri kutsakatika: Fedora inosiyawo makumi matatu nematatu